Condo for Sale in South Okkalapa - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Condos for Sale in South Okkalapa
Ad Number S-10038440
မေတ္တာလမ်းမပေါ် Minicondo 2bedroom 7Floor 950သိန်း
(19×54)' Minicondo အခန်းသန့် #၉၅၀သိန်း ညှိနှိုင်း #မေတ္တာလမ်းမကျယ်ပေါ် တေ...
Ad Number S-10027597
ရောင်းမည်။&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Condo မြေညီ + ထပ်ခိုး အမြ...
Ad Number S-9997727
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဟီရိလမ်းနဲ့ စာဂ၂၂လမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ minicondoမှ...
Ad Number S-10043185
2,010 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10041883
မနီနီဝင္းအိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ Close
တ/ဥ မီနီကွန်ဒို အရောင်း
Ad Number S-10041826
#အလွန်စည်ကားတဲ့သုမင်္ဂလာလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ ၈ထပ်ခွဲတိုက် မြေညီထပ်(ထပ်ခိုးပါ)...
Ad Number S-10040916
ေတာင်ဥက္ကလာ​မြို့နယ်​ ေမတ္တာလမ်းမကြီးေပါ်ရှိ MINI​ CONDO​...
Ad Number S-10040233
1250 sqft Housing Apartment for sale
Ad Number S-10039931
Ad Number S-10038971
Toe Tet Htun-တိုးတက်ထွန်းအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် Close
820 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10037816
🇲🇲🌲 တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ (14/3) ရပ်ကွက်တွင် Furniture အပြည့်အစုံဖြင့် မိသားစု...
Ad Number S-10034846